Commentary Archives - Page2of 15 - Guna Raj LuitelGuna Raj Luitel
बेथिति विरुद्ध लड्न अरू धेरै ‘सनकी’ चाहियो0ON: April 9, 2015
डा. केसीको उज्यालोतर्फको यात्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा १२ दिन लामो आमरण अनसन अन्त्य गरी डक्टर्स रूमबाट बाहिर निस्किँदा डा. गोविन्द केसीलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने पक्ष थियो– उज्यालो। उनी आफ्ना भोक र घुमफिरका इच्छालाई खुम्च्याएर सत्यको आग्रहमा विस्तारित भए। र त्यो सत्यको… बृस्तृत…
भाटाको भय0ON: February 26, 2015
‘हाम्रा आम आदमी’लाई भाटे कारबाही किन? हातमा धारिला भाटा बोकेर एमाओवादी युवा दस्ता वाइसिएलले मंगलबार राजधानीमा जुलुस निकाल्यो। त्यसले नागरिक स्वतन्त्रता पूर्णबहाली गर्ने, नागरिकको मन जितेर राजानीति गर्नेभन्दा बलको भरमा राजनीति गर्ने एमाओवादीको मिचाहापनलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। त्रासको राजनीतिप्रतिको मोह… बृस्तृत…
Asia uncovered0ON: November 28, 2014
MANILA – The Philippines had just come out of two decades of the Marcos dictatorship when the 1986 pro-democracy movement erupted on the streets. But the euphoria of democracy soon gave way to disillusionment, the hard-won, fragile freedoms were threatened frequently by… बृस्तृत…